उपत्यकामा स्मार्ट सिटी- विचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १५, २०७६ मल्ल के. सुन्दर
सूचना अनुसार, सबभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको स्मार्ट सिटी भक्तपुरको तालकोटदेखि काठमाडौंका जोरपाटी र मूलपानी, काठमाडौं–भक्तपुर पुरानो बाटो, नेपाली सैनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भएर अरनिको राजमार्गसम्म विस्तार हुनेछ । त्यस क्षेत्रको करिब १ लाख रोपनी खेतीयोग्य भूमि अधिग्रहण गरिनेछ । दोस्रो स्मार्ट सिटीका लागि भक्तपुरकै बालकोट र गुन्डु क्षेत्रलाई रोजिएको छ । तेस्रो स्मार्ट सिटीचाहिँ उपत्यकाको दक्षिणतिर रानीकोट, भैंसेपाटी, खोकना, बुङमती तथा छिम्ती क्षेत्रमा बन्नेछ । चौथो स्मार्ट सिटीका लागि उपत्यकाको उत्तरमा रहेका सामाखुसी र बालाजु बाइपासदेखि काभ्रेस्थली, टोखासम्मको भूमि पहिचान गरिएको छ ।
परियोजनाको डीपीआर तयारी चरणमै छ । आगामी नौ महिनाभित्र बुझाउने गरी नेपालको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्सी दुइटा तथा फिनल्यान्डको हेलेन एन्ड कम्पनी र नेपालकै फुलब्राइट कन्सल्ट्यान्सी एक–एक स्मार्ट सिटीको डीपीआर बनाउन प्राधिकरणको छनोटमा परेका छन् । यसबापत फिनिस कम्पनीले १२ करोड तथा नेपाली कम्पनीहरूले २–२ करोड रुपैयाँ पाउने छन् । करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको परियोजनाका लागि लगानी २० प्रतिशत आन्तरिक तथा ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट जुटाइनेछ । प्राधिकरणका अनुसार, चारै स्मार्ट सिटीका लागि १ लाख ३० हजार रोपनी खेतीयोग्य भूमि मासिनेछ । पछि उपत्यकामा १० लाख जनसंख्या थपिनेछ ।
प्रस्तावित परियोजनाले काठमाडौं उपत्यकाको वर्तमान नगरीय संरचना र जनसांख्यिक स्वरूपमा ठूलो असर पार्ने निश्चित छ । सर्वविदितै छ, उपत्यकाको कुल क्षेत्रफल करिब ५७० वर्ग किलोमिटर छ । यति सानो क्षेत्र कुनै बेला हरियाली तथा उब्जनीका लागि प्रख्यात थियो । मञ्जुश्रीले नागदहको पानी निकास गराई यहाँ मानवबस्ती बसाएको प्रागैतिहासिक कथन त छँदै छ, त्यसअतिरिक्त उपत्यकाको सभ्यता हजारौं वर्ष पुरानो थियो भन्नेमा अध्येताहरूको दाबी रहँदै आएको छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यले पनि उपत्यकाको सुन्दरतामा मोहित भएर ‘अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी’ उपमा दिएका थिए । तर सत्ताको गलत नीतिका कारण उपत्यका आन्तरिक आप्रवासनको अतिक्रमणमा पर्‍यो । सही भूमि व्यवस्थापनको अभावमा अत्यन्त सुन्दर उपत्यका कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुँदै गयो । सहरी विकासका नाममा अहिले विद्रूपताको दृष्टान्त बनेको छ— काठमाडौं उपत्यका !
प्राकृतिक सुन्दरताबाहेक काठमाडौं उपत्यकाको अर्को पहिचान हो— पूर्वजहरूले खडा गरेका गौरवमय संस्कृति तथा सम्पदा । यो एकैथलोमा सात–सात विश्वसम्पदा छन् । कलाकृति, मन्दिर, स्तूप, गुम्बा, सतल आदि मूर्त सम्पदाहरू यत्रतत्र छन् । अनि रैथाने समुदायले जीवन्त राखेका जात्रा, चाड, पर्व, रीति, परम्परा, पूजा जस्ता अनगिन्ती अमूर्त सम्पदाको पनि केन्द्र हो यो । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकालाई विदेशी ज्ञाता तथा विज्ञहरूले खुल्ला सांस्कृतिक संग्रहालय भन्ने गरेका छन् । यही विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचानका कारण काठमाडौं उपत्यका सिङ्गो नेपाललाई नै विश्वमा परिचित गराउने राष्ट्रिय धरोहर हो । राष्ट्रले यसमा गर्व गर्न सक्नुपर्छ ।
तर, यही सम्पदा क्षेत्रको सरहदभित्र प्राधिकरणले चार नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माणको परियोजना अगाडि सार्नुले राज्यसत्ता कुन धरातलमा छ भन्ने संकेत गर्छ । भक्तपुर, साँखु, बुङमती, खोकना, टोखा जस्ता पूर्व लिच्छविकालीन सम्पदानगरमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी हुने स्मार्ट सिटीको निर्माण यथार्थत: हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर र गौरवलाई ओझेलमा पार्ने कुटिल खेल हो । सरकार सम्पदा, संस्कृति तथा पहिचान संरक्षणमा कति गम्भीर रहेछ भन्ने गुह्य यसले खोलेको छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा अहिले झन्डै २६ लाख मानिस स्थायी रूपमा बसोबास गर्छन् । त्यस अनुसार यहाँको जनघनत्व प्रतिवर्गकिमि करिब ४,५६१ छ । अस्थायी बसोबास गरिरहेकाहरूको संख्या जोड्ने हो भने अझ भयावह चित्र देखिनेछ । नेपालको दोस्रो ठूलो सहर विराटनगरको जनघनत्व २,८३८ मात्र छ भने वीरगन्जको १,८४८ । जनघनत्व घटाएर जानसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न राज्यले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको बसोबासलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने रणनीति बनाउनुचाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो । तर, उल्टो चार–चार नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गरेर अर्को पाँच वर्षभित्र उपत्यकामा अहिलेको भन्दा झन्डै ४० प्रतिशत बढी जनसंख्या बढाउन लागिएको छ । यसबाट उपत्यकालाई कस्तो असर पर्ला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यथार्थत:, काकाकुल उपत्यकावासीहरूका लागि अहिले आवश्यक एक अञ्जुली खानेपानी हो । मेलम्ची सपनामार्फत राज्यको असंवेदनशीलताले दशकौं पार गरिसकेको छ । उपत्यकावासीहरू स्वस्थ रूपमा जीउनका लागि धूलोमुक्त सास फेर्न चाहन्छन्, दुर्गन्धबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका छन् । अनियन्त्रित सवारी साधन अनि ओहोरदोहोर गर्न पनि नसकिने असहज सडक उपत्यकाको नियति बनिरहेको छ । न आम नागरिकको जीउधनको, न आमा दिदीबहिनीको अस्मिताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ यहाँ । सरकार यी दीर्घ समस्याको समाधानमा गम्भीर नरही खर्बौं खर्चिने स्मार्ट सिटीको कुरा गरिरहेको छ, आखिर कसको स्वार्थमा ?
भूमाफियाहरूको चलखेलमा जताततै सलबलाएका हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र जग्गा प्लटिङ अनि त्यहाँ उभ्याइएका पुङमाङे भौतिक संरचनाले उपत्यकाको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पहिल्यैदेखि व्यंग्य गरिरहेका छन् । बर्सेनि बढ्दो खेतीयोग्य भूमिको क्षयीकरण र खुल्ला स्थान अतिक्रमणले त्यत्तिकै चिन्ता बढाइरहेकै छ । लाग्छ, काठमाडौं उपत्यका अविवेकी तथा अदूरदर्शीहरूको कब्जामा परिरहन अभिशप्त छ ।
उपत्यकाको आवश्यकता थप गगनचुम्बी भवन, स्मार्ट सिटी वा आधुनिक सुविधायुक्त भौतिक संरचनाहरूको होइन । ठूलठूला घरहरूको भीडमा उपत्यकाले मौलिक पहिचान भेट्न सक्दैन । यसलाई न्युयोर्क वा सिंगापुर बन्नु छैन । रोम, एथेन्स र बनारस जस्तै पुर्खाको सामर्थ्य र समर्पणमा स्थापित मौलिक पहिचान यसको गौरव हो ।
होला, पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने परियोजना कति राजनीतिकर्मी, प्रशासकीय हाकिम अनि ठेकेदारका लागि अकुत सम्पत्ति आर्जनको सहज उपाय बन्न सक्ला, स्मार्ट सिटीको भौतिक संरचनासँगसँगै कति अज्ञात व्यक्तिको आर्थिक सूचकांक उकासिएला, तर यो गौरवशाली उपत्यका पक्कै मृत सहरमा परिणत हुनेछ । राष्ट्रियता, समाजवाद, जनपक्षीयताको महिमागान गर्ने हाम्रा नेताजन यसबारे मौन बसिरहनुचाहिँ आश्चर्यजनक छ । संसद्को बैठक चालु छ, तर राष्ट्रिय धरोहरलाई दीर्घकालीन असर पार्ने बेतुकका परियोजनाबारे जनप्रतिनिधिहरू किन चुँसम्म गर्दैनन् ?
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:५३
भाद्र १५, २०७६ बिना थिङ
दुई साताअघिको शुक्रबार एउटा आधारभुत विद्यालयको गुनासो पेटिकाको ताला खोलियो । कापीका पानामा, चिर्कटामा विद्यार्थीका अनेक गुनासा थिए । तिनमा लेखिएका थिए— ... ले मेरो पेन्सिल भाँचिदियो । ... सीमा अचेल मसँग बोल्दिनँ । त्यसैले मलाई नरमाइलो लागेको छ ।
... राजकुमार सरले पढाएको बुझिँदैन । ... घरमा बुवा र दाइको झगडा भइरहन्छ । त्यसैले मलाई होमवर्क गर्न मन लाग्दैन । ... म स्कुल आउने बाटोमा केटाहरू बसेर जिस्काउँछन् । मलाई त्यो बाटो भएर विद्यालय आउन मन लाग्दैन । ... शिवले मलाई ब्याड टच गर्छ । पटक–पटक ब्याड टच गर्छ । ... मेरो ड्रेस च्यातिएकाले म स्कुल आउन सकिनँ । तर सरले मेरो कुरा नसुनी कारबाही गर्नुभयो । ... ...
त्यस्ता गुनासामा केहीले मात्र आफ्नो नाम लेखेका थिए ।
गुनासो पेटिका धेरैअघि राखिएको भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको थिएन । विद्यालयले यसको महत्त्व बुझ्न सकेको थिएन । लामो समयपछि भएको शिक्षक बैठकले विद्यार्थीमा चिडचिडोपन बढ्दै गएको, विद्यार्थीहरूबीच झैझगडाले उग्र रूप लिएको, पढाइमा केन्द्रित नभएको जस्ता समस्याबारे छलफल चलाउने निर्क्योल गर्‍यो । तिनको मनोविज्ञान बुझेर परामर्श गर्नुपर्ने ठहर गरियो । त्यसका निम्ति उनीहरूका समस्या थाहा पाउनु जरुरी भयो । तर उनीहरू सबै शिक्षकसँग सजिलै खुल्न नचाहेको थाहा भयो । उनीहरू आफ्नो गोपनीयता कायम रहोस् भन्ने चाहन्थे । त्यसका लागि विद्यालयले गुनासो पेटिकाको महत्त्व बुझ्यो ।
शिक्षकहरूले कक्षाकक्षामा गएर विद्यार्थीलाई आआफ्ना समस्या कागजमा लेखेर गुनासो पेटिकामा खसाल्न प्रेरित गरे । त्यस्ता समस्या, जुन उनीहरूले सीधै शिक्षकलाई भन्न सकेका छैनन्, तर नभनी पनि भएको छैन । गुनासो पेटिका प्रत्येक शुक्रबार खोलेर समस्या पढ्ने अनि समाधानमा सहयोग गर्नेमा उनीहरूलाई विश्वस्त तुल्याइयो । त्यसको राम्रो प्रभाव पर्‍यो ।
विद्यार्थीले विभिन्न समस्या भोगिरहेका हुन्छन् । सुन्दा वा देख्दा सामान्य लाग्ने समस्याले तिनको मनोविज्ञानमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको हुन सक्छ । सहपाठी वा अरूले शारीरिक दुर्व्यवहार गर्नु, आफ्नो सामान हराउनु, शिक्षकहरूबाट विभेद हुनु, पढाएको नबुझ्नु आदि उनीहरूका जल्दाबल्दा समस्या हुन् । पारिवारिक हैरानी, अभिभावकको द्वन्द्व, सम्बन्धमा उतारचढाव, छिमेकीको दुर्व्यवहार पनि उनीहरूको दैनिक जीवनमा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ । यसै कारण पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका हुँदैनन् । अनि उनीहरूलाई निराशाले गाँज्दै लान्छ । यसको विकराल रूप लागूऔषधको प्रयोगदेखि आत्महत्यासम्म हुन सक्छ । समयमै त्यस्ता समस्याको पहिचान र निराकरणमा ध्यान नदिए परिणाम भयावह हुन सक्छ ।
यस्ता समस्या भोग्नेमा पूर्व प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मकै विद्यार्थी हुन सक्छन् । उनीहरू सजिलैसँग आफ्ना समस्या आफ्ना भनिएकाहरूसामु राख्न सक्दैनन् । राखिहाले पनि सम्बन्धित व्यक्तिले हल्का रूपमा लिइदिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले उनीहरूमा आफ्ना समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा संशय हुने गर्छ । अनि भित्रभित्रै पीडित भइरहन्छन् ।
माथि उल्लिखित विद्यालयको गुनासो पेटिकामा परेका धेरैजसो गुनासा सहपाठीले गरेका कुटपिटसम्बन्धी थिए । एउटा गुनासो अलि फरक किसिमको थियो, जसबाट सहपाठी तर उमेरगत र शारीरिक संरचनागत हिसाबले ठूलो विद्यार्थीको प्रत्येक दिनको यातनामा एउटा विद्यार्थी परिरहेको यथार्थ थाहा पाइयो । पीडितले यो कुरा शिक्षकलाई भन्न सकेको थिएन । त्यो ठूलो विद्यार्थीले थाहा पाए अझ बढी यातना दिने त्रास उसमा थियो । गुनासो पेटिकामार्फत यो समस्या थाहा पाएपछि विद्यालयले पीडक विद्यार्थीसँग सोधखोज गर्‍यो, उसलाई परामर्श दियो । अहिले त्यो ठूलो विद्यार्थी अन्य सहपाठीप्रति सहानुभूति राख्ने भएको छ ।
कक्षा ७ पढ्ने छात्राले आफूलाई अर्को सहपाठीले बारम्बार ब्याड टच गर्ने गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यसबाट आफू पढाइमा केन्द्रित हुन नसकेको र सकेसम्म विद्यालय आउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने लागेको समेत उल्लेख थियो । यो भयावह थियो । विद्यालयले पीडक छात्रसँग सोधपुछ थाल्यो । उसले सुरुमा त आफूले त्यस्तो गलत काम नगरेको जिकिर गरिरह्यो । केरकार गर्दै गएपछि उसले आफ्नो गल्ती स्विकार्‍यो, पछुतो मान्यो र कसैलाई त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनायो । उसले पीडित छात्रासँग माफी माग्यो । यो सबै गोप्य रूपमा गरिएकाले पीडित छात्राको हृदयको ठूलो बोझ हट्यो । अचेल ती दुवै छात्रछात्रा पढाइमा केन्द्रित छन् ।
स्कुले केटाकेटीका यस्ता विविध समस्या हुन्छन् जसलाई विद्यालय प्रशासन, शिक्षक एवं परामर्शदाताले सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा विद्यार्थीर्हरू केही हदसम्म भए पनि खुसी हुन्छन् । उनीहरूमा शिक्षक र विद्यालयप्रति विश्वास जाग्छ । यसले उनीहरूलाई सिर्जनात्मकतातर्फ उन्मुख हुन सघाउँछ, गलत बाटोमा जानबाट रोक्छ, कुलतमा फस्नबाट जोगाउँछ । त्यसैले गुनासो पेटिका प्रत्येक विद्यालयमा अनिवार्य रूपले राख्नुपर्छ । यो नियमित रूपमा चल्नुपर्छ र समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ । यसले गर्दा केटाकेटीमाथि पर्न सक्ने भवितव्य टरेर जान्छ ।
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:५१
श्याम शर्मा, सुरेन्द्र सुवेदी, वन्दना जैन, वामदेव अधिकारी
महेन्द्र सुब्बा, भाेजराज पाैड्याल